Jose Mourinho Ka Falceliyay Markii Majalada Dalka Brazil Ahi Ay Neymar Jr U Aqoonsadeen Xidigii Brazil Ugu Fiicnaa Kadib Pele. - GOOL24.NET
Jose Mourinho Ka Falceliyay Markii Majalada Dalka Brazil Ahi Ay Neymar Jr U Aqoonsadeen Xidigii Brazil Ugu Fiicnaa Kadib Pele.
Jose Mourinho ayaa ka falceliyay in majalada dalka Brazil ka soo baxda ee Placar ay dhawaan Neymar Jr u aqoonsadeen xidigii reer Brazil ee kubbada caga ugu fiicnaa tan iyo wixii ka danbeeyay Pele laakiin Jose Mourinho ayaan aaminsanayn in Neymar Jr uu yahay kan Pele ku soo xiga.
Inkasta oo uu Jose Mourinho qiray guulaha shaqsiga ah ee uu Neymar Jr gaadhay, haddana waxa uu wuxusay magacyo ay tahay in aan la ilaawin wuxuuna Mourinho u muuqday mid Neymar Jr iyo majalada Placar xusuusay in marka hore uu xulka qaranka Brazil guul ku hogaamiyo inta aanu hawaysan halyayo badan oo Brazil koobka aduunka wacdaro uga soo dhigay.
Neymar Jr ayaa si xun ugu soo fashilmay koobkii aduunka ee Russia 2018 oo ay xataa sumcadiisii kubbada cagta aduunku hoos ugu dhacday wuxuuna haddaba ciyaaray laba koob aduun oo uu door muhiim ah ka ciyaari karayay si uu Brazil markale ugu soo celiyo halkii ugu saraysay ee xulalka aduunka.
Jose Mourinho ayaa qiray in Neymar Jr uu isla markii uu qaarada Yurub soo gaadhay guulaystay laakiin waxa uu ku dooday in Rivaldo iyo Ronaldo ay iyaguba isla markii ay horyaalada Yurub yimaadeen ay guulaysteen balse ay dheer yihiin in ay Brazil koobka aduunka u horseedeen.
Jose Mourinho oo ka hadlaya in Neymar Jr loo doortay xidigii labaad ee Brazil ugu fiicnaa ayaa yidhi: “Neymar waa hibo fantastik ah, mana jiro qof taas ka shakiyi karaa. Waxa uu yimid Yurub oo uu markiiba guulaystay. Laakiin waxaan filayaa in ay ilaaween ciyaartoy waqti aduunka ugu fiicnaa sida Ronaldo iyo Rivaldo, kaliya waa laba xiiso badan wax badan ayaanan ka xusuusan karaa”.
Mourinho oo sababta ay Rivaldo iyo Ronaldo ay kaga fiican yihiin Neymar ka hadlaya ayaa yidhi: “Sidoo kale waxay yimaadeen Yurub isla markaana fantastik ayay ahaayeen, laakiin taas waxaa ka danbaysa, waxay ka gudbeen xaalado khaas ah oo noloshii dalkooda ah oo ah in ay heerka caalami ku guulaysteen”.
Mourinho ayaa shuruud ku xidhay in Neymar Jr uu noqdo kuw a ugu fiican Brazil wuxuuna yidhi: “Neymar waxa uu sii wadi doonaa in uu ku dagalaamo halka ugu saraysa ee Yurub, haddaba halkaas ayuu joogaa, (la guulaysiga Brazil) ayaa noqon doonta riyada uu sii wadi doono”.